पेंसिल्वेनिया WIC | जेपीएमए, इंक
तपाईंको WIC क्लिनिकलाई कल गर्नुहोस् ...
तपाईंसँग WIC फूडहरू वा रकमहरूको बारेमा प्रश्नहरू छन्।
तपाईं एक किन्नका लागि खरीद गर्न सक्षम हुनुभएन जुन तपाईले सोच्नुभएको छ WIC लाई अनुमोदन गरिएको छ।
तपाईंको कार्ड गुमाएको छ, चोरी, वा क्षतिग्रस्त छ।
तपाईंको कार्डको बारेमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू
आफ्नो ईआईसीआईआई कार्ड हरेक WIC नियुक्तिमा ल्याउनुहोस्। यदि तपाईंले आफ्नो कार्ड बिर्सनुभयो भने, तपाईंलाई लाभ प्राप्त गर्न क्लिनिकमा फर्कनु पर्छ।
तपाईंको पेस वा वालेटमा तपाइँको पिन राख्नुहोस्।
तपाईंको PIN लाई कुनै पनि व्यक्ति नगर्नुहोस् जुन तपाईं आफ्नो कार्ड प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न।
आफ्नो कार्ड मोडा नगर्नुहोस् वा तपाईंको कार्डमा चिप खरिद गर्नुहोस्।
तपाईंको कार्ड प्रत्यक्ष सिडलाइटमा राख्नुहोस्, जस्तै कारको ड्याशबोर्डमा।
PIN के छ (व्यक्तिगत पहिचान नम्बर)?
यो एक चार अंकको गोपनीय नम्बर हो जुन तपाईले आफ्नो EWIC कार्डको साथ प्रयोग गर्नका लागि आफ्नो खाद्य फायदाहरू पहुँच गर्न प्रयोग गर्नुहुनेछ।
पिन चयन गर्दा, चारवटा नम्बरहरू छान्नुहोस् जुन तपाईंलाई सम्झन सजिलो छ तर कसैको लागि गाह्रो पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ (उदाहरणका लागि, तपाईंको बच्चाको वा आमाबाबुको जन्मदिन)। तपाईँको PIN को लागि 1111 जस्ता अंकहरू जस्तै, जस्तै 1234, वा संख्याहरूको अनुक्रम, प्रयोग नगर्नुहोस्।
तपाईंको प्रशिक्षित WIC प्रक्सी भन्दा अन्य कुनै पनि आफ्नो पिन नदिनुहोस्। यदि कसैले तपाईँको PIN जान्दछ र तपाईंको अनुमति बिना तपाईंको खाद्य लाभ प्राप्त गर्न तपाईँको कार्ड प्रयोग गर्दछ, ती लाभहरू प्रतिस्थापन गरिने छैन।
के म ठुलो पिनमा प्रवेश गर्दछु?
तपाईंको पिन अनुमान लगाउन प्रयास नगर्नुहोस्। यदि सही पिन सातौं लगातार प्रयास गरेर प्रविष्ट गरिएको छैन भने, तपाइँको पिन बन्द हुनेछ, र तपाईंको पिन रिसेट गर्न तपाईंको क्लिनिकमा फर्किनेछ। यो तपाईंको PIN अनुमान लगाएर तपाईंको खाद्य फायदा प्रयोग गरी सुरक्षाको रूपमा गरिन्छ।
मैले आफ्नो पिनको लागि के गरेँ?
पहिचानको प्रमाणको साथ क्लिनिकमा फर्कनुहोस् र तपाई यसलाई रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ।
मैले के गर्न सक्दिनँ मैले आफ्नो पिन बाट पैसा कमाएको छु?
यदि कसैले तपाईंको PIN लाई यो नहुनु हुँदैन भने, तुरुन्तै तपाइँको क्लिनिकलाई कल गर्नुहोस्।
मैले आफ्नो लाभ कसरी प्रयोग गर्न सक्छु?
तपाईं क्लिनिक छोड्ने बित्तिकै तपाईं आफ्नो हालको महिनाको लाभ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। भविष्यमा पहिलो महिनाको लाभ 12: 01AM मा पहिलो महिनामा उपलब्ध छ। 11 मा मासिक लाभको म्याद समाप्त हुन्छ: महिनाको अन्तिम दिनमा 59pm।
कसरी मेरो लाभको स्तर थाह पाउनेछु?
प्रत्येक खरिदबाट रसिदले हालको महिनाको लागि ब्यालेन्स देखाउँदछ। यदि तपाईंसँग तपाईंको रसीद छैन भने, तपाईं क्लिनिकमा फर्कन सक्नुहुन्छ वा भन्डार गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको लागि एक ब्यालेन्स प्रिन्ट गर्न।
यदि मेरो कार्डले काम गर्नेछैन?
तपाईंको क्लिनिकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
मेरो बुबाले के गर्नुपर्दा मेरो बुबाले के गर्नु पर्छ?
तपाईंको ईईआईआईआईसी कार्ड सुरक्षित गर्नुहोस्! तपाईंको अर्को फाइदाहरू एउटै ईडआईसी कार्डसँग खरीद गरिनेछ।
यदि मेरो कार्ड के भयो वा चोरी छ भने?
तपाईंको क्लिनिक तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस्। कार्ड हराएको वा चोरी भएको बेला तपाइँ प्रतिस्थापन कार्ड पाँच (5) दिन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको eWIC कार्डको साथ खरीदारी
तपाईंको EWIC कार्डको साथ फूडहरू खरिद गर्नुपर्दछ तपाईंको WIC लाभ ब्यालेन्समा समावेश हुनुपर्छ।
कुनै पनि खाना स्क्यान गर्न अघि, क्यान्डियरलाई तपाईंले ई-आईआईआईसी कार्ड प्रयोग गर्दै भन्नुहुन्छ।
आफ्नो कार्ड कार्ड रिडरमा घुसाउनुहोस् र निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। प्रणालीले तपाईंको पिन प्रविष्ट गर्न सोध्नेछ।
कैशियर वस्तुहरूलाई पुष्टि गर्न स्क्यान गर्दछ स्क्यान स्वीकृत छ र तपाईंको परिवारको फाइदा भित्र समावेश छ।
तपाईंले खरिद गर्ने अन्तिम अघि खरिद गर्न चाहानु भएको समीक्षा र समीक्षा गर्न अनिवार्य छ। तपाईंले खरिद गर्नुभन्दा अघि कैशियरले तपाइँलाई प्रयोग रसीदको समीक्षा गर्नुपर्छ।
तपाईंले खरिद गर्नुभएका खानाहरू तपाईंको ईडब्ल्यूआईसी कार्डबाट हटाइने छ र तपाइँलाई एक ब्यालेन्स ब्यालेन्स रसिद पाउनुहुनेछ जुन यसले बाँकी छ भनेर देखाउँछ।
सँधै तपाईंको फाइदा ब्यालेन्स रसीद राख्नुहोस्। यसले तपाईंको परिवारको उपलब्ध फूडहरू र अन्तिम दिन तपाईंको वर्तमान फाइदाहरू खर्च गर्न देखाउँदछ।